प्रमुख निर्वाचत आयुक्त यादवको विभूषण फिर्ता - Namasteholland, News, Information and Technology
प्रमुख निर्वाचत आयुक्त यादवको विभूषण फिर्ता
६ भाद्र २०७५, बुधबार १०:१४04
काठमाडौँ । सरकारले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवलाई दिएको प्रसिद्ध प्रवल जनसेवाश्री विभूषण फिर्ता लिएको छ । गणतन्त्र दिवस २०७४ को अवसरमा घोषणा भएको विभूषणहरुमा यादवसँगै ८ जनालाई प्रसिद्ध प्रवल जनसेवाश्री दिइने उल्लेख गरिएको थियो । तर, साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभूषण पाउनेहरुको नाम र क्रम संशोधन गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा संशोधन गरिएको आफ्नो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि गृह मन्त्रालयले २९ साउनमा विभूषण पाउनेहरुको सूची सार्वजनिक गरेको छ । तर, त्यसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नाम छैन ।
प्रसिद्ध प्रवल जनसेवाश्री पाउनेहरुमा ७ जनाको मात्र नाम छ । घोषणा कार्यक्रममा भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको नाम ८ जना थिए र यादवको नाम पाँचौं नम्बरमा थियो ।
विभूषण किन र के कति कारणले खोसियो आफूलाई थाहा नभएको प्रमुख आयुक्त यादवले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
११ फाल्गुन २०७५, शनिबार ०९:३६06
१६ फाल्गुन २०७५, बिहीबार ०८:४१06
१ बैशाख २०७६, आईतवार ०८:१३020
Hey Buddy!, I found this information for you: "प्रमुख निर्वाचत आयुक्त यादवको विभूषण फिर्ता". Here is the website link: https://www.namasteholland.com/%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%96-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%9a%e0%a4%a4-%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a5%81%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4-%e0%a4%af/. Thank you.